Republika ng Pilipinas ((tl))/((fil))
Republic of the Philippines en
República de las Filipinas es
Repoblikan'i Filipina ((mg))
Ho an'Andriamanitra, ny Mponina, ny zavaboahary ary ny firenena'
Teny ofisialy fiteny filipino sy fiteny anglisy
Tanàna lehibe indrindra Quezon City
- hakitroka faha 13
92 681 453 mpo.
Anaran'ny mponina Filipin
Sandam-bola Peso filipina (PHP)
Hiram-pirenena Lupang Hinirang
Ny fôsialy dia nanaporofo fa olona maro no nipetraka tany Filipina nandritra ny an'arivony taona. Niampita ny tany sy ny ranomandry teo aloha ny Negritos mba hipetraka ao amin'ny nosy. Vondron'olona aostrônezianina maro no tonga tany Filipina nandritra ny arivo taona voalohany, nanosika ny mponina teratany ho any anatiny, ary angamba nanangona azy ireo tamin'ny alalan'ny fanambadiana.
Tonga tamin'ny taonjato faha-8 ireo mpivarotra sinoa. Ny fitomboan'ny fanjakana bodista dia nahavita ny varotra tamin'ny vondronosy Indoneziana, Inde, Japana ary Azia atsimo atsinanana. Nihamafy ny herin'izy ireo ny ady nifanaovan'ny fanjakana tany Azia Atsimo Atsinanana. Mandritra izany fotoana izany, ny fielezan'ny finoana silamo tamin'ny alalan'ny varotra sy ny fampielezam-pinoana, sahala ny Kristianisma, izay nentin'ny mpivarotra sy misiônera tany amin'ny faritra; Ny Arabo dia tonga tao Mindanao tamin'ny taonjato faha-14. Rehefa tonga ny Eoropeana voalohany, izay notarihan'i Ferdinand Magellan tamin'ny taona 1521, dia nisy rajah tany avaratr'i Manila, izay niankina ara-pahefana tamin'ny fanjakana atsinanan'i Azia. Na izany aza dia nizaka-tena ireo nosy ireo
Nanomboka tamin’ny fahatongavan’ny olona tamin’ny alalan’ny tany ny tantaran’i Filipina. Ny eoropeana voalohany indrindra tonga tany Filipina dia i Fernand de Magellan tao amin’ny nosin’i Homonhon, any atsimo andrefan’i Samar, ny 16 Martsa 1521. Talohan’ny nahatongavan’i Magella, maro ireo Fanjakana nisy tao Filipina, ohatr’ilay Fanjakana Bodistan’i Butuan, ny fanjakan’i Tondo ary Maysapan, fanjakana natanjaka ary nanan-karena nanomboka tamin’ny taonjato fahafolo, na ny soltanà mozilmana an’i Sulu, Mainila, Magindanao ary Lanao. Nifandray tamin’i Sina, India, Japana, Tailandy, Vietnam ary Java ireo fanjakana ireo, fa tsy misy fanjakana tena nanam-pianjadiana manerana an’i Filipina.
Nanomboka tamin’ny taona 1565 ny tambanosin’i Filipina no zana-tany espaniola, tamin’ny nahatongavan’i Miguel Lopez de Legazpi, nanorina ny tanànan’i San Miguel izy teo amin’ny nosin’i Cebu. Tamin’io fotoana io no nanorenana ny tanànan’i Manila eo amin’ny nosin’i Luzon. Haharitra telonjato taona ny fanjanahan-tanin’ny espaniola ao Filipina. Nandritra izay fe-potoana nanjanahany an’i Filipina izay, dia nitondra zava-maro avy any Andrefana ny espaniola miaraka amin’ny haifomba tandrefana (krisianisma, fanontana, taratasy, kalandrie...). Tsy zanatany izay manokana i Filipina tamin’izany fotoana izany fa faritra iray ao amin’ny zana-tan’i Espaina Vao (Nueva España) manana ny tanànan’i Mexico ho renivohitra. Nafindra tany Madrid ny renivohitra taorian’ny fahaleovantenan’i Meksika nanomboka tamin’ny toana 1821. Nanjanaka an’i Filipina koa ny britanika tamin’ny 1762 ary 1764. Nandritra ny fanjanahantany espaniola, maro ireo tanàna voaorina ary naorina miaraka amin’izany koa ny foto-drafitr’asa. Namadika ireo tera-tany ho kristianina ireo misionera espaniola ary nanorina fianarana, oniversite ary hopitaly manerana ny tamba-nosy filipina.
Nanomboka tamin’ny volana Aprily ny taona 1896 ny tolom-piavotana filipina amin’i Espaina, ary nifarana roa taona tety aoriana tamin’ny fanambarana ny fahaleovantena ary ny Repoblikan’i Filipina Voalohany. Anefa ny fifaneken’i Paris nosoniavina tamin’ny 1898 namarana ny ady filipina espaniola, dia nanome an’i Etazonia ny fahefan’i Filipina. Tsy neken’i filipina izay fifanekena izay ary nanambara ny hiady amin’i Etazonia i Filipina tamin’ny 2 Jiona 1899. Ny filoham-pirenena tamin’izany fotoana izany Emilio Aguinaldo, dia voasambotry ny Amerikana tamin’ny 1901 ary nifarana herintaona taoriana ny ady. Niaiky ny fandresen’ny amerikana ny manam-pahefana filipina, anefa mitohy hatramin’ny taona 1935 ny ady. Tena nanomboka tamin’ny 1905 ny fitondran’i amerikana an’i Filipina. Nanomboka naitatra ny fizakan-tena an’i Filipina tamin’ny 1935 mba hitondra any amin’ny fahaleovantena natao ho amin’ny 1946. Voatery najanona ilay fizakan-tenan’i Filipina noho ny Ady lehibe Faharoa. Rehefa tapitra ny ady lehibe faharoa dia nahaleotena i Filipina.
Ny governemantan'i Filipina, dia mitovy amin'ny governemantan'i Etazonia. Ny Filohan'i Filipina dia miasa ho filoham-panjakana, filohan'ny governemanta, ary ny filohan'ny tafika ao Filipina sy ny tafika mitam-piadiana. Ny filoha dia voafidy amin'ny fifidianana toy ny any Amerika. Mijanona ho filoha mandritra ny 6 taona izy. Izy no mpitarika ny kabinetra.
Ny mpanao lalàna Filipiana bicameral, ny Kongresin'ny Filipina, dia ahitana ny Antenimieran-doholona ao Filipina sy ny Antenimieran'ny Filipina; Ny mpikambana tsirairay dia voafidy amin'ny fifidianana malaza. Misy loholona 24 izay manompo 6 taona ao amin'ny Antenimieran-doholona nefa ny Kaongresin'ny solontenany dia tsy mihoatra ny 250 ireo mpikambana ao amin'ny kaongresy tsirairay avy izay manefa fe-potoana 3 taona.
Ny sampan-draharahan'ny governemanta dia tarihin'ny Fitsarana Tampony ao Filipina, izay manana ny filoham-pirenena amin'ny maha-filoha azy ary ny mpanolotsaina faha-14, izay notendren'ny filoha.
Ny Filipina dia mpikambana manorina sy mavitrika ao amin'ny Fikambanan'ny Firenena avy any Azia Atsimo Atsinanana (ASEAN). Izy koa dia mpandray anjara mavitrika amin'ny fiaraha-miasa ara-toekarena Asia-Pacific (APEC), mpikambana ao amin'ny Vondrona 24 ary iray amin'ireo mpikambana mpanorina 51 ao amin'ny Firenena Mikambana tamin'ny 24 Oktobra 1945.
Ny firenenan’i Filipina dia tamba-nosy iray miisa nosy 7 107 (1 000 amin’ireo no misy olona mipetraka) manana velarantany manontolo telo hetsy kilometatra toradroa. Valonjato kilometatra miala ny kaontinanta aziatika no misy an’i Filipina, eo anelanelan’ny Nosy Borneo ary Taiwan.
Noho ny fisian’i Filipina eo amin’ny Fehin’afon’ny Pasifika, maro dia maro ireo afotroa mbola velona ao Filipina ary matetitetika ireo horohorontany.
Filipina dia firenena andalam-pandrosoana. Tamin'ny taona 1998, ny toekarena Filipina - izay manafangaro fambolena, ny indostria maivana ary ny tolotra fanohanana - dia niharatsy noho ny vokatry ny krizy ara-bola Aziatika sy ny haratsian'ny toetr'andro. Ny fitomboan'ny toekarena dia nitombo ho 0,6% tamin'ny taona 1998 avy amin'ny 5% tamin'ny taona 1997, saingy tafaverina hatramin'ny 3% tamin'ny taona 1999 ary 4% tamin'ny taona 2000. Tamin'ny taona 2012, dia 6,6%
Nampanantena ny governemanta fa hanohy ny fanavaozana ara-toekarena hanampiana an'i Filipina hanaraka ny dingana fampandrosoana any amin'ireo firenena vao misondrotra any Azia atsimo atsinanana. Ny paikady dia manatsara ny fotodrafitrasa, manamboatra rafitra hetra ho fanampiana ny fidiram-bolan'ny governemanta, fanohanana ny fanilihana (fanesorana ny governemanta) ary ny fampindramam-bola ho an'ny toekarena, ary ny fitomboan'ny varotra ao amin'ny faritra. Ny hoavin'ny ho avy dia miankina tanteraka amin'ny fampiroboroboana ara-toekarena amin'ireo mpiara-miasa telo lehibe, Sina, Etazonia ary Japana.
((en)) Tranonkala ofisialin'ny governemantan'i Filipina
Hita tao amin'ny "https://mg.bywiki.com/w/index.php?title=Filipina&oldid=815912"
Voaova farany tamin'ny 12 Jiona 2018 amin'ny 16:59 ity pejy ity.